Kachasị mma m Kachasị Mma | Martech Zone
Ezigbo ndị enyi m ghọtara na m nwere mmasị na ọrụ m. Ekwesịrị m ịgwa gị na n'agbanyeghị mbọ niile m gbara iji mee ka ọrụ m ka mma, ọrụ, ọrụ… ọ baghị uru ma e jiri ya tụnyere ihe m nwere n'ụlọ, nwa m. Bill na ada Katie. Ọ bụrụ na m zutere akara aka m echi, aga m ahapụ ụwa a na-amara na ahapụwo m otu nwa okorobịa na nwa agbọghọ nọ n’afọ iri na ụma bụ ndị nwere nka, obi ụtọ, enweghị ọdịmma onwe, ịhụnanya, eziokwu, na ịrụsi ọrụ ike.
Nwa m nwoke na-eju m anya oge ọ bụla ọ bulitere guitar, igwe okwu, ma ọ bụ gwakọta egwu nke ya na PC ya. Ọ na-amalite na IUPUI, na-ewere nzere Physics ma ọ nwere ike pere mpe n'ọtụtụ ebe, gụnyere French, Acoustical Engineering, or Political Science. Ikwesiri ige ufodu egwu ya na saiti ya ịnụ talent ya, mana echere m na ị ga-ekwenye.
Mụaka ahụ na mama ha na-eji oge ọ bụla agwụ ike. Ọ bụ ezie na anyị agbaala alụkwaghịm kemgbe ihe karịrị afọ 5, ọ bụ ezigbo mmekọrịta anyị niile nwere na onye ọ bụla n’ime anyị ji onye nke ọzọ kpọrọ ihe. Kidsmụaka agaghị anụ ka anyị na-alụ ọgụ, ebe ọ bụ na ebumnuche anyị niile bụ ka ha nwee obi ụtọ ma mee ihe ọ bụla anyị nwere ike ime iji mee ya.
Otu ihe atụ, enyefere m ụfọdụ kaadị ngụsị akwụkwọ maka Bill ka o wetara ya ego maka kọleji. Ọ chọrọ ụgbọ ala, ọ ga-achọkwa ego maka akwụkwọ, echere m na ọ ga-adị mma na nkuzi mana ọ nwere ike ịnwe mgbazinye ego. Anyị ga-ahụ. Ka o sina dị, mama ya zipụrụ ndị ezinụlọ ya na ndị enyi ya na ndị ezinụlọ m na ndị enyi ha ọkwa niile. Nke ahụ mara mma. (Nye nne na nna ọ bụla na-agba alụkwaghịm ma ọ bụ nke gbara alụkwaghịm… Ọ B ABR THE NA KMIDSAKA!)
Anyị na-eji oge nkeji iri anọ na ise agba egwu ụbụrụ anyị. Ndị na-anya ụgbọala ga-echerịrị na anyị bụ ndị nzuzu na ndị ọbịa na-adịghị ahụkebe na draịva na-agbakarị ihe ngosi na anyị. Ihe kachasị amasị anyị bụ Bat nke Hel site Meatloaf… mana anyị na-ege ntị ma na-abụ abụ n’ihe niile. E nwere di na nwunye 45s na 70s ọdụ na ụzọ ya mere na ọ dịghị ihe dị mma.
Ma mgbe anyị na-abụ abụ, anyị na-etinye ihe niile n'ime ya… ka ịba ụba egwu na nti na-ada ụda, nke ka mma. (Anyị na-akwụsịtụ ịbụ abụ otu ugboro n'otu oge maka egwuregwu kachasị amasị m, "Guess that roadkill"). Site na oge anyị ga-apụ Wepụ 50B, anyị anaghị eku ume ọkụ ọkụ, ụda olu, ma na-achị ọchị dịka onye nzuzu.
Ọnwa ole na ole gara aga, nwa m nwanyị sonyere na asọmpi egwu Indiana na Bloomington. Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọdachi - igodo mbụ rutere na Katie chefuru abụ niile. O bere ákwá, chịkọta onwe ya, ma bido ịgụ egwu ọzọ. Anaghị m enyere ya aka - amaara m na ọ ga-adọghachi azụ (mana nwata nwoke makụrụ ya mgbe emechara ya). Katie merụrụ ọmarịcha ọrụ wee daa Gold.
N’abalị taa bụ Egwuregwu Oge opupu ihe ubi na Greenwood Middle School maka ukwe nke isii, nke asaa, na nke asatọ. Katie nwere naanị ya, "Portrait in Blue" ma na-abụ abụ ya otu ọnwa gburugburu ụlọ. Enyere m ya otu obere ndụmọdụ tupu ọ gafee n'abalị a - chọta ebe ma lelee ya. E nwere di na nwunye narị nne na nna na ụmụ akwụkwọ na egwu n'abalị a otú ahụ ka m maara na ọ ga-atụ ụjọ. Tupu ya agaa, ọ gwara m na ya na-abụ abụ ahụ maka m.
Anọ m na-eche Katie ụbọchị niile taa na otu ọ ga - esi mee. Na nwa nwoke, ọ mere! Ya solo bellowed na mgbatị ahụ na ndị mmadụ 'isi tụgharịa. Enweghị m ezigbo igwefoto vidiyo mana m wepụtara ekwentị igwefoto PDA m ma dekọọ ihe omume ahụ. Ana m arịọ mgbaghara maka ọdịdị dị oke egwu na ụda anaghị ada oke ụda, mana ị nwere ike ịnụ ka Katie na-abụ abụ.
M ga-agha ụgha ma ọ bụrụ na m kwuo na anya mmiri adịghị n'anya m. Enweghị m ike ikwupụta n'okwu etu esi dị ịtụnanya. Ndị gbara m gburugburu tụgharịrị wee sị, “Nke ahụ ọ̀ bụ ada gị? Ọ dị egwu! ”. Otu anya m hụrụ Katie mere ka m hụ ụdị obi ụtọ ọ na-enwe. Kidsmụ m bụ ndị isi kachasị mma.
Ọ dịghị ihe ga-eme nso.
Mee 23, 2007 na 3: 05 AM
Akwa post Doug! Gụọ ya site na mmalite ruo na njedebe, dị elu ise nye Katie!
Mee 23, 2007 na 8: 43 AM
Daalụ, Tony. Abụ m onye mpako Papa!
Mee 23, 2007 na 3: 45 AM
Ọ bụ ihe ịtụnanya etu ụmụaka si eto ngwa ngwa.
Dị ka ọnụ ọgụgụ nke ụbọchị ahụ: "Ihe nketa bụ ihe nne na nna nke ụmụaka maara ihe kwere na ya."
Na, hey, obughi gi bu onye webedere ihe banyere ihe ndi mmadu bu? Ma vidiyo ole na ole gara aga ebe ị YouTubeGoogled?
Mee 23, 2007 na 10: 19 AM
Mara mma post Doug. Enwere m nwa nwoke n’uzo, enwere m olile anya na m ga-abụrịrị ezigbo nne na nna ya.
Echere m na ọ bụ ihe magburu onwe ya na ị nwere ike ịnọgide na-enwe mmekọrịta dị mma na nwunye gị. Dị ka ị na-ekwu, ọ bụ maka ụmụaka, ọ naghị enyere aka ma ọ bụrụ na ị na-alụ ọgụ oge niile ma na-egwu ụmụaka ibe ha dịka ụdị egwuregwu gbagọrọ agbagọ. Enwere m ndị enyi toro na ndị nne na nna otu a, ọ dịkwa mwute ịhụ.
Mee 23, 2007 na 10: 43 AM
Ekele Brandon! Emeela m ọtụtụ ihe n’ụzọ n’ụzọ, kwere m. Agwawo m ụmụ m ihe ndị m maara na-ewute ha mgbe iwe were m, oge ụfọdụ anaghị m enyekwa ha nlekọta kwesịrị ha. Mana oge obula anyi n’aga ebe ozo, anyi na agwa ibe anyi na anyi huru onwe anyi n’anya - obuna mgbe iwe di anyi. Anyị makụọ ... ọtụtụ!
M na-agwakwa ụmụ m eziokwu banyere ihe m mejọrọ, m na-arịọ ha mgbaghara mgbe m mejọrọ ha. N’ihe m nwere ike ime, a na m ahapụ ha ka ha mee mkpebi nke aka ha ma anyị ga-atụlekwa nsonaazụ nke mkpebi ndị ahụ.
Nwa m nwoke na-akwa oyu banyere otu anyi si di ezigbo enyi. Anyị na-akpakọrịta dị ka ndị enyi ya ọ bụla na-eme. Maka IUPUI, ọ ga-ebiri n'ụlọ! M ka bụ onye isi (maka ugbu a).
Mee 23, 2007 na 3: 36 PM
Douglas, nke ahụ dị mma nke ukwuu. Daalụ maka ịkekọrịta ya na anyị niile. Ọ bụ ihe na-akpali mmasị ka unu si egwu egwuregwu n'ụgbọala. Kidsmụaka nwere ihu ọma inwe gị… Chineke gozie !!
Mee 23, 2007 na 7: 48 PM
Daalụ Doug - M na-atụ anya ịbụ nne ma ọ bụ nna, mana na-echegbu onwe m maka ịrụ ezigbo ọrụ na ịghara ịmegharị ụmụ m.
Echere m na ihe ị na-ekwu banyere ịgwa ha eziokwu banyere mmejọ ị mejọrọ na ndụ gị, na ịhapụ ha ka ha mee mkpebi nke onwe ha bụ ụzọ ị ga-aga. Enwere ụfọdụ nkuzi ị ga - amụta maka onwe gị, ọbụlagodi na ọ bụ ụzọ siri ike.